पानीको महत्व जीवनको लागि
पृथ्वीमा पानीको विभिन्न स्रोतहरू पाइन्छन्। जस्तैः खोलाको पानी, आकाशे पानी, कुवाको जरुवा मुलको पानी र बरफ पग्लेर बन्ने पानी, असिना पानी, हिउ आदी। वायुमण्डलमा वास्पिकरण र चिसिने प्रक्रियाका कारण पानीका विभिन्न रूपहरू परिवर्तन भईरहेको हुन्छ साथसाथै पानी एकस्थानबाट अर्को स्थानसम्म पनि पुगिरहेको हुन्छ जसलाई जलचक्र भनिन्छ। सम्पूर्ण मानव जीवनलाई यस चक्रको अती महत्व छ। प्रकाशको सही संयोजन हुने हो भने वायुमण्डल भएका पानीका थोपाहरूमा सूर्यको प्रकाश परावर्तन भएमा इन्द्रेणी देखा पर्ने गर्दछ।
पानीको फरक खालको गुणहुने भएकोले यो प्राणीहरूका लागि अति उपयोगि छ। यो एउटा राम्रो घोलक हो र यसको अति उच्च सतहि दबाब हुन्छ। ४° सेल्सियसमा शुद्ध पानीको घनत्व सबैभन्दा उच्चहुने गर्दछ, ४° सेल्सियस भन्दा तापक्रम बढेपनि घटेपनि यसको घनत्व घट्ने गर्दछ। पानी एउटा तटस्थ पदार्थ भएकोले वातवरणमा विकिरणको शोषण गरी हरित गृह प्रभावलाई समेत घटाउन मद्दत पुर्याउने गर्दछ। पानीको बिशिष्ट ताप धारण शक्ति एकदमै धेरै हुने हुनाले यसले पृथ्वीको मौसमलाई निर्धारण गर्न महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नेगर्दछ।
एउटा राम्रो घोलक पदार्थ भएको हुनाले यसले विभिन्न लवणहरू तथा चिनीलाई घुलाउने काम गर्दछ। यसका अलावा पानीले विभिन्न तत्वहरूको रासायनिक प्रतिक्रियामा उत्प्रेरकको रूपमा काम गर्दछ। सजिवहरूको शरीरमा हुने विभिन्न प्रतिक्रियाहरूमा पनि पानीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछ।
यद्यपी केही तत्वहरू पानीमा नघुल्ने खालका हुन्छन्। केही तरल पदार्थ जस्तै तेल, घ्यू र ढुङ्गा, काठ, धातुहरू पानीमा घुल्दैनन्। प्राणी कोषमा हुने सेल मेम्ब्रेन्ले पानीको यही गुणको उपयोग गरी प्राणी कोष भित्र र बाहिरका रासायनिक तत्वहरूको संयोजन गर्ने गर्दछ।
पानीको सतहि दबाब धेरै भएकोले नै पानी थोपाको रूपमा बस्ने गर्दछ। यस्तो उदाहरण शिशा जस्तो कुनै पानी सोस्न नसक्ने वस्तुमा पानी परेको बेलामा देख्न सकिन्छ। पानीको यो गुण बिरुवाहरूले प्रकाश संस्लेषणको बेलामा उत्पन्न भएको पानीलाई बाहिर फाल्न अति उपयोगि हुन्छ।
पानीको ठोस रूप बरफ तरल पदार्थमा तैरिने गर्दछ। यो साधारण गुण भएपनि यसको वातावरणीय महत्व धेरै छ। ठोस अवस्थामा बरफको घनत्व पानीको घनत्व भन्दा कम हुने भएकोले बरफ पानीमा तैरिन्छ। तैरिएको बरफले वातवरणीय चिसोपनालाई तल रहेको पानीसम्म पुग्न दिंदैन फलस्वरूप तल्लो सतहको पानी तरल अवस्थामै रहन्छ। पानीको यही अनौठो गुणका कारण धेरै चिसा ठाँउहरूमा माथिल्लो सतहमा बरफ जमे पनि तल रहेको पानीमा जलचरहरू जीवित रहन सक्छन।
पानीको संरक्षण र हाम्रो जिम्मेदारी
आज हर व्यक्ति पानीको दुरुपयोग गरिरहेका छन्। बाथरुम, शौचालय, भान्साघर र बगैंचाको सिंचाईमा पानीको खपत अत्यधिक मात्रामा भइरहेको छ। हामी सबैको कर्तव्य हो पानीको दुरुपयोग हुनबाट सुरक्षा गर्नु र पानीलाई खेर जान नदिनु, किनकि कुनै पनि चीजको दुरुपयोग दरिद्रता तथा निर्धनताको कारण हुन पुग्छ। फजुल खर्च गर्नाले नोक्सान पनि हुन्छ र आवश्यक पर्ने व्यक्तिहरुले प्रयोग गर्न पाउँदैनन्। न उसले आफूले गरेको गलत कार्यको बारेमा सोच्दछ र न अर्को व्यक्तिलाई उसले गरेको गलत कारणले भएको हानीको बारेमा सोच्दछ। इस्लाम फजुल खर्च गर्नबाट रोक्दछ र संरक्षण गर्न आज्ञा दिन्छ। क़ुरआनमा भनिएको छ “खानु पिउनु तर फजुल खर्च नगर्नु, अल्लाह फजुल खर्च गर्नेवालालाई मन पराउँदैनन।”
मुहम्मद सल्ल. जसको जीवन प्रत्येक मानवको लागि आदर्श थियो, पानीको संरक्षण गर्न वहाँले दिएको अर्ती उपदेश हामीसबैका लागि उपयोगि सावित हुनेछ। वहाँ धेरैमा ६५० ग्राम पानीबाट वुजू गर्नु हुन्थ्यो तथा अढाई लीटर देखि तीन लीटरसम्म पानीले नुहाउनु हुन्थ्यो।(मुस्लिम)
एक व्यक्ति हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि. को छेउ आयो र सोध्यो वुज़ूको लागि कति पानी हामीलाई आवाश्यक पर्छ ? त वहाँले भन्नुभयो-आधा लिटर भन्दा केही बढि, फेरी भन्नुभयो नुहाउनको लागि कति पानीको जरुरत पर्छ ? अढाई देखि तीन लीटरसम्म। उसने भने, मलाई यति पानीले पुग्दैन। वहाँले भन्नुभयो, वहाँलाई पुग्यो जो तिमी भन्दा उत्तम थिए, अर्थात् अल्लाहको रसूल मुहम्मद सल्ल.।(अहमद)
एक पटक मुहम्मद सल्ल. हज़रत साद बिन अबी वक्क़ास रज़ि. को नजिकबाट जाँदै हुनुहुन्थ्यो त्यसै समय वहाँ वुज़ू गरि रहनु भएको थियो र पानीको प्रयोग ज़रुरत भन्दा ज़्यादा खर्च गरिरहेका थिए। वहाँले भन्नुभयो, हे साद! यो के फजूल खर्च गरेको ? उनले सोधे, के वुज़ूमा पनि फज़ूल खर्ची हुन्छ ? वहाँले भन्नुभयो, हो किन होइन! यदि तिमी बगिरहेको नदीको नजीक नै भए पनि आवश्यकता भन्दा धेरै पानीको प्रयोग गर्नु फुज़ूलखर्ची हो।
अनुरोधः- हामी प्रत्येक देशवासी दाजु-भाई तथा दिदीबहिनीहरुसँग विन्ती गर्दछौ कि यस जटिल समस्याको अनुभव गरून जुन पानीको अभावमा प्यासले छटपटाएका हुन्छन् जुन अरुले अत्यधिक पानीको नोक्सान गराई धेरै मात्रामा पानीको प्रयोग गर्नाको कारणले पीडित बन्नु परेको हुन्छ र हाम्रो उत्तरदायित्व हुनेछ कि हातमा हात मिलाएर यस समस्याको समाधानको लागि अग्रसर हुनु हो, किनकि पानीको सुरक्षा गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो।
पानीको संरक्षणको लागि केही नियम
(१) बगैंचाको सिंचाई बिहान अथवा साँझमा पातलो पाईपद्वारा गर्नु धेरै हदसम्म पानीको बचत हुनसक्छ ।
(२) गाडिलाई पाईपले धुनुको सट्टा बाल्टीमा पानी लिएर कचौराको प्रयोग गरेर धुनु राम्रो हो।
(३) ब्रस गर्दाको समय, दाह्री काट्दाको समय, भाँडा माझ्दाको समय नललाई खुल्ला राखेर अनावश्यक रुपमा पानी खेर जानबाट रोक्नु पर्दछ। यसै गरि काम सकेपछि नललाई राम्रोसँग बन्द गर्नुपर्छ। यदि प्रयोग गरिएको पानीलाई हामी अरु कुनै अन्य काममा लगाउन सम्भव भए प्रयोगमा ल्याउनुहोस्।
(४) थोपा-थोपा गरेर पानी झरेर धेरै नोक्सान हुन्छ। यदि पुरै दिन पानीको थोपा-थोपा गरेर चुही रहयो भने एक दिनमा अनुमानितः २७ लीटर पानी नोक्सान हुन्छ।
4 thoughts on “पानीको महत्व जीवनको लागि”
Very nice essay?????☺☺☺☺?
Thank you so much Sister Aakanxa Rai ji for A Valuable Comment. Plz Read, Share, Comment. thanks Again
And very important ????????
People should know the importance of water……..????????✌✌✌✌